Ugu yaraan 10 qof oo lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday saldhig ay AMISOM ku leedahay magaalada Beledweyne - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan 10 qof oo lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday saldhig ay AMISOM ku leedahay magaalada Beledweyne
October 25, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Qiiq weyn oo la arko oo ka yimid saldhiga milatariga. [Sawirka: Twitter]
Beledweyne-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 qof ayaa la dilay, oo ay kamidyihiin ciidamo AMISOM katirsanaa kadib markii qof isa-soo miidaamiyay oo saarnaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa gudaha loo gashay saldhig milatari oo AMISOM ku leedahay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, bartamaha Soomaaliya, sida uu sheegay qof dadka deegaanka ah.
“Toban qof baa ku dhimatay qaraxa,” qof dadka deegaanka ah oo codsaday in aan magaciisa la sheegin, ayaa Puntland Mirror sidaa u sheegay.
“Shan kamid ah kuwa dhintay waxay ahaayeen ciidamada AMISOM ee ka socda Jabuuti.” Ayuu ku daray.
Howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa boggooda Twitter-ka ku qoray in ay dileen ku dhawaad 10 xubnood oo Al-Shabaab ah kuwaasoo soo weeraray saldhigooda milatari ee kuyaala Beledweyne.
Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarka, sida ay baahiyeen mareegaha lala xiriiriyo, iyaga oo soo xiganaya afhayeenka howlgalada milatariga kooxda Al-Shabaab, Cabdicasiis Abu Muscab.
Garoowe-(Puntland Mirror) Markab laga leeyahay dalka Koonfur Kuuriya oo lagu magacaabo CPO Korea oo qaada kiimikada ayaa waxaa weeraray lix nin oo hubaysan oo watay dooni yar xilli uu markabka marayay xeebaha Bari ee Soomaaliya [...]